रावलजी जति आत्मकेन्द्रित, रवाफी र असहिष्णु मान्छे यो धर्तीमा अर्काे काेही छैनः सूर्य थापा « Dainiki
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग एभिन्युज खबरमा राजेन्द्र बानियाँले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।(सम्पादक
– कुन विषय र कुन बुँदामा त्यस्तो भएछ ? म सोँध्न चाहन्छु ।
– त्यो सरासर झुठ हो ।
– भन्नु ।
– प्रधानमन्त्रीले माहुरी बन्न पनि भन्नुभएको थियो । तर माहुरीको चर्चा गरेनन् मान्छेहरु । एकदम आतंकित भए र अरिंगाल शब्दसँग डराए । अरिंगाल बन भन्नुभएको होइन्, जाइलाग्नुपर्दा अरिंगालजस्तो बन्न भन्नुभएको हो । काम गर्दा माहुरीजस्तो बन भन्नुभएको हो । माहुरीजस्तो कर्मी र पौरखी बन मात्र भन्नुभएको हो प्रधानभन्त्रीज्यूले । तपाईले एकदम ठीक सन्दर्भबाट कुरा उठाउनुभएको छ । मैले ओली–प्रचण्डको एकत्वका विषयमा लेखिएको एउटा लेख, त्यहीभित्रको एक अंशलाई उधृत गरेर शेयर गरें । एकथरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मानिसहरु कस्ता छन् भने तिनीहरु लेखिएका एकलाइन पूरै पढ्ने धैर्यता राख्दैनन् । कसले लेखेको हो भन्ने बुझ्दैनन् । त्यहाँ तल त मैले लेखक(गंगा बीसी)को नाम पनि उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो पनि बुझ्ने हैसियत राख्दैनन् । मैले नै कटाक्ष गरेको, मैले विरोध गरेको र अर्का अध्यक्ष कमरेडका विरुद्ध लेखेजस्तो गरी हल्लाखल्ला गरे । त्यो लेख अहिले पनि सँगसँगै सुरक्षित छ, जो हेर्न सकिन्छ ।
– हाम्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध म किन प्रयोग हुनु ? प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएका नाताले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको कार्य जिम्मेवारीअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मैले जान्दछु । म आफ्नो जिम्मेवारी र हैसियत बुझेकै मान्छे हुँ । यी सबै मान्छेका आआफ्ना अनुमान मात्रै हुन् । केही व्यक्तिहरु अनावश्यक रुपमा धुर उठेपछि मैले जवाफ दिएकोचाहिं हो । जो जसरी प्रतिवादमा उत्रिन्छ, त्यसैगरी जवाफ त दिनुपर्छ ।
– त्यो सरासर गलत हो । दुबै अध्यक्षप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बारेमा मेरा आफ्ना बुझाइ छन् । मैले धेरै लेखेको पनि छु । कतिपय सन्दर्भमा उहाँका चिजहरु मलाई सान्दर्भिक लागेनन् भने मैले कटाक्ष पनि गर्ने गरें । त्यो चाँहि आज नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा भएको छ । उहाँको सार्वजनिक सम्मान, उहाँको योगदान, शिष्टाचार, पार्टीको अध्यक्षका रुपमा मेरो नेता, पार्टीमा आम रुपमा नेतृत्व गर्नेगरी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सरकारलाई सफल पार्न व्याकिङ गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ । पार्टी एकतामा दुबै नेता नभएको भए हिजो संयुक्त विज्ञप्ति मात्र होइन, संयुक्त अपानि तयार भएर पनि त एकता हुन सकेको थिएन नि ! नेतृत्वको भूमिका कति हुन्छ भन्ने हामी बुझेकै मान्छे हौँ । नेतृत्वमा पनि ऐन मौकामा निर्णय लिनसक्ने र गर्नसक्ने, त्यसढंगको बोल्डनेस भएको नेतृत्वको कति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्नेमा पनि हामीलाई कुनै भ्रम छैन् । मानिसहरु बुझ्दै नबुझी लडाउन र दूरी बढाउन लाग्छन्, जबकि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मेरो पुस्ता नै फरक हो । उहाँ नेता हो, म कार्यकर्ताजस्तै हो ।
– भीम रावल कुन जेलमा पर्नुभयो ? कुन पर्चा छर्नुभयो ? त्यसमा मलाई भन्नु जरुरी छैन् । उहाँको बायोग्राफी उहाँले र उहाँका शुभेच्छुकले लेख्ने हो । म प्रष्ट के जान्दछु भने भीम रावल २०५४ सालदेखि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो । म त्यति मात्रै जान्दछु ।
– उहाँको कालो धुँवा कविता त प्रश्नै गर्ने खालको छ नि त ! म कविताको पाठकका हिसाबले भनिरहेको छु । उहाँका दुईवटा कविता छन्, एउटा मन प¥यो, अर्कोचाँहि तथ्यसँगत पनि छैन् । तथ्यमा आधारित त छँदैछैन । उहाँले २०५६ सालमा लेखेको कविता लिम्पियाधुरा पढ्दा यो लेख्ने कवि र तपाई एउटै व्यक्ति हो भनेर मैले प्रश्न गरेको यथार्थ हो ।
– उहाँले सार्वजनिकरुपमा बाँडिसकेपछि मैले तदनुरुप नै प्रतिक्रिया दिएको हुँ । सामाजिक सञ्जालमै पढेर, सामाजिक सञ्जालमै जवाफ दिएको हो मैले पनि ।
– मानिसहरुलाई यति फुर्सदिलो ठान्छन् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ? एउटा कविताको बारेमा समालोचना गर्नसक्ने, त्यसको अन्तरवस्तु, त्यसको आशय बुझ्नसक्ने हैसियत भएको र चार अक्षर पढेरै यहाँसम्म आएको मान्छे हुँ म ।
– त्यसमा आलोचना कहाँनेर छ ? उहाँको कवितामा गालीगलौज छ, जथाभावी छ र कुण्ठा छ । मैले लेखेकोमा दुईवटा कवितामा अन्तर छ भनिएको छ । लिम्पियाधुरा लेखेको कवि र तपाई एउटै हो कि होइन ? मलाई कन्फ्यूज भो भनेर सोँधेको मात्र न हो त्यहाँ । यो कुरा किन भनेको छु भने पोलिटिकल कन्टेस्ट हुन्छ । जस्तोकि सिके राउतलाई बिखण्डनको राजनीति छाडेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदा कसैको चित्त किन दुख्छ ? बिखण्डनको राजनीति छाडेर मूलधारमा आउनेहरुलाई जुन देशले पनि स्वागत गर्छ र गर्नुपर्छ । सिके राउतलाई ल्याउने विषयमा पनि उनका केही बाछिटाहरु के उत्पन्न भए भन्ने मुख्य कुरा होइन । मूल कुराचाँहि सिके राउतको समूह कताबाट कतातिर फर्कियो, कुन बाटो लियो र कहाँ आयो भन्ने नै हो ।
– ती सबै नोटिसमा थिए । तातेको फलाम पनि पानी हाल्नेबित्तिकै चिसो भइहाल्दैन नि त ? च्वाईऽऽऽय गर्छ, त्यसले आवाज निकाल्छ, धुँवा निकाल्छ र अरु प्रतिक्रिया निकाल्छ नि । मूलकुरा उहाँ कहाँबाट कहाँ आउनुभयो भन्ने नै हो ।
– किन लुकिछिपी गर्नु ? स्थायी कमिटी, सचिवालय, पार्टी सबैको जानकारीमा यो गर्ने त हुँदैन । स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरुलाई सबै कुरा थाहाँ नहुन पनि सक्छ । मूल कुरा कन्टेन्ट र कन्टेक्स्टको कुरा हुन्छ । उपलव्धिको कुरा हुन्छ । त्यसले के प्रतिफल दिन्छ भन्ने पनि हुन्छ । प्रदेश नं २ मा नेकपाको राष्ट्रिय सभामा शून्य स्थान थियो । चार स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ । २ स्थान राजपालाई र २ स्थान नेकपालाई गरेर सहमति भयो । राजपाको नेतृत्वसँग सहमति भएको छ । उपस्थित राजपाका धेरै नेताहरुलाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नै ।
– राजेन्द्र महतोलाई गुण लगाउने विषय नै होइन यो । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो हित हेर्छ नै । शून्य भएको ठाउँमा २ स्थान राजपासँग मिल्दा आउने निश्चित भएपछि त्यसले हित गर्छ भने किन किन्तु परन्तु ? यस्ता सम्झौता विषयगत हुन्छन् । यस्ता सम्झौताहरु सान्दर्भिकताका आधारमा हुन्छन् र गरिन्छन् ।
-हिजो कसका के सन्दर्भ थिए, कसले के भन्यो भन्ने होइन् । राजेन्द्र महतोजी आफ्नो हितका लागि २ सिटका लागि सहमति गर्न आउनुभयो । नेकपाले २ सिटका लागि सम्झौता गरेको हो । स्थायी कमिटीलाई सहमति जानकारी गराइएकै छ । भीम रावलजी सम्झौताको प्रक्रिया र वार्ताको प्रक्रियामा हुनुहुन्थेन नि त । उहाँको जिम्मेवारी त्यो थिएन नि त । सबै कुरा सबैलाई थाहा नहुन पनि त सक्छन् । पार्टीका दुबै अध्यक्षसहित नेतृत्वले पार्टीको हितका लागि गरेको निर्णय मलाई थाहा नभएर वा अरु कसैलाई थाहा नभएर के फरक प¥यो ? आफूलाई तोकिएको परिभाषित जिम्मेवारी कहाँ छ ? त्यसले पनि त निर्धारण गर्छ नि ! म प्रचार विभागमा छु, तपाइसँग कुरा गर्छु, तर म प्यूठानको इन्चार्ज थिएँ भने त तपाईसँग यसरी कुरा गर्दिनथें नि ।
– उहाँले के भन्नुभयो म त्यसको सवालजवाफमा जादिनँ । उमेरका हिसाबले, राजनीतिक पुस्ताका हिसावले उहाँ र म फरक हाँै । केन्द्रीय कमिटीमा उहाँ र म समान हौँ । उहाँ स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ, म केन्द्रीय कमिटीमा छु, त्यस हिसाबले उहाँ सिनियर हो । परिभाषित कामका हिसावले उहाँ सुदुरपश्चिम इन्चार्ज हो । म प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ । सीमा मिच्ने कुरा भारतले मिच्दा पनि उस्तै हो, रावलजीले मिच्दा पनि उस्तै हो । मैले यही भनेको हो । प्रचार विभागको काम प्रचार विभागमा तोकिएकै मान्छेले गर्ने हो । रावलजीलाई तोकिएको काम मैले गर्न हुँदैन । पार्टीमा यही भएर त कार्यविभाजन गरिएको होला ।
मैले भनेको विभागको मर्यादाको कुरा, कामको कुरा, परिभाषित जिम्मेवारीको कुरा हो । उहाँले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ, अन्तरवार्ता दिनुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, मैले यो राय राखे भन्नुहुन्छ, कविता वाचन गर्नुहुन्छ त्यसमा हामीले के आपत्ति गरेका छौ र ? तर वैठकमा के निर्णय भयो वा कसो भयो भन्ने कुरा सुनाउने कुराचाँहि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नै हो । उहाँ नहुँदाका अरु प्रवन्ध हुन्छन् । कहिले महासचिवले भन्नुहुन्छ । प्रचार विभाग प्रमुखसँग सल्लाह गरेर कहिलेकाँही मैले गर्ने पनि सन्दर्भ आउछ । तर पार्टीका स्थायी कमिटी, सचिवालयले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने त विधान र नियमावलीले प्रवक्ता र प्रचार विभाग प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
– कुनचाँहि नेताको दाहिने हात रहेछु म ? त्योचाँहि मेरो जानकारीमा नभएको, तर तपाईको जानकारीमा भएको रहेछ ! मलाई पनि जानकारी गराइदिनुभयो भने म धन्य हुने थिएँ ।
– यो चाँहि विचरा मानिसहरुको पूर्वानुमान मात्रै हो ।
– कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा सन्दर्भमा विजयकुमार पाण्डेसँगको अन्र्तवार्तामा भन्नुभएको छ – यी अखवारहरुले मेरो ७४ वर्षको उमेरमा यतिधेरै महिमागान गरिरहेका छन् । जबकि मेरो दुःख त मलाई नै थाहा छ ! काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र ५ को निर्वाचन परिचालन कमिटीको म संयोजक थिएँ । म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका हैसियतले र पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । संयोगले भीम रावलजीको भिनाज कोलोनी यसै क्षेत्रभित्र पर्छ । म प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका तीनैजना उम्मेदवारहरुलाई भारी मतले जिताउन लागिपरेको थिएँ । परिणाममा १० हजारको हाराहारी मतान्तरले ईश्वर कमरेडले जित्नुभयो । म त्यसरी जिताउन तल्लीन थिएँ । तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, १७ गते मेरो भान्जाले सुसाइड गर्दा पनि भोलिपल्ट चितामा भान्जालाई चढाएर म अन्तिम चुनावी सभामा बसुन्धाराको कार्यक्रममा पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने काममा सक्रिय छु ।
– परपीडकहरु, आफ्नो हैसियत नभएकाहरु र स्याडिस्टहरुले त्यस ढंगका आरोप लगाउँछन् । तर, मेरो भनाई के हो भने चारपटक, पाँचपटक सुनें भनेर जुन रावलले लेख्नुभएको छ नि, उहाँ नेकपा (एमाले)कै स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो त ! बीचमा मसँग उहाँकै घरमा कुरा गर्दा एकदम गलतढंगले वामदेवले कुरा उठाएकोसमेत भन्नुभएको थियो । उहाँकै घरमा यस्तो कुरा भएको थियो । अहिले उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत केही समस्या छैन । उहाँ मेरो नेता नै हो । हुन त उहाँले दश मनिाकोे हुनुहुन्थ्यो म जेल पर्दासमेत भन्नुभएछ । यति पिछएिको मनोदशा बोकेको मान्छे उहाँ रहनुभएको जानकारी भयो । उहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँ तत्कालीन अन्तरिम मन्त्री झलनाथ खनालको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चारपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । उहाँका जिम्मेवारीका बारेमा मैले केही कमेन्ट गरेको छैन । उहाँ हाम्रो नेता नै हो । अध्ययनशील मान्छे हो । ऐकेडेमिक पनि मान्छे हो । उहाँले लेखेको नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन ः उदगम र विकास पुस्तक धेरै नेताहरुले पढेका छौं । तर, उहाँ जत्तिको आत्मकेन्द्रित, रवाफी र असहिष्णु मान्छे यो धर्तीमा छैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्टै देखिन्छ । मैले खाली विधि, प्रक्रिया र परिभाषित कामको कुरा गर्दा उहाँले सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका शव्दहरु मैले हेरेको छु नि सार्वजनिक रुपमै !
– तपाईहरुले जसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसै होला । नजर त तपाईहरुको हो नि त !
– नेपालमा केही कर्पोरेट मिडियामा काम गर्ने, पार्टी र संगठनसँग साइनो सम्बन्ध नभएका पछिल्लो पुस्ताका मान्छेहरुले तपाईले भनेको कुरा गर्न सुहाउँछ । नत्र आजको पत्रकारिता, आजको स्वतन्त्र समाज, आजको खुला समाज, आजको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न कसको कति योगदान छ भन्ने कुराको समीक्षा र अनुसन्धान गरे भइहाल्यो नि !
– मेरा बाजेको कुरा होइन, हामी आफ्नै पुस्ताको कुरा गरेको मैले । किन बाजेको कुरा गर्नु ?
– तपाईंले यस विषयमा तथ्यमा रहेर कुरा गर्नुभएन । एउटा पत्रकार भएर निरंकुशताका पक्षमा सपथ खायो, मुठी उठायो भने तपाई संवेदनशील र चिन्तित हुनुस् । नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठनहरुमध्ये एउटा प्रेस संगठन नेपाल पनि हो । त्यसमा आमरुपमा लेख्ने, पढ्ने र संचारकर्ममा रहेका मानिसहरु आफ्नो इच्छाले संगठित छन् । पेशागत रुपमा रहेका पत्रकारितामा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई हामी त्यस संगठनमा संगठित गर्छौ । त्यसमा तपाई भ्रमित हुनुपर्ने किन जरुरत छैन भने त्यहाँ कुनै कुरा लुकाइएको छैन । त्यो संगठनले बाहिरै राखेको कार्यक्रम हो । तर देशभरिबाट आएका संचारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम पनि थियो । सपथ लिने जम्मा २५१ जना न थिए, अरु त सबै संचारकर्मीहरु थिए । सबैले सपथ लिएको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य समस्या रहेका कारण डाक्टरहरुले बाहिर जान अनुमति दिनुभएको थिएन । उहाँहरुले पूर्वनिर्धारित गरिसकेको कार्यक्रम थियो, एपेन्डिसाइटिसको अप्रेशन हुनुभन्दा अगाडि नै । कार्यक्रम हामीले सिंहदरवारमा गरेको त होइन, निवासमा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर जान चिकित्सकहरुले अनुमति नदिइरहेको बेला देशभरिबाट आएका पत्रकारहरुलाई बोलाएर चिया खुवाउने कुरामा के को आपत्ति र किन विरोध ?
– प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसबेला गराउनुभएको कि गराउनुभएन ? त्यो हामीलाई थाहा भएन । तर अहिले त उहाँले कसरी पाउने ? प्रधानमन्त्री निवासमा विपक्षी दलका नेताले सपथग्रहण गराउन कसरी मिल्छ ? विपक्षी दलको नेताको निवास होइन, प्रधानमन्त्री निवास हो नि ! फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मात्र त नबुझ्नु न ! स्वास्थ्य समस्याका हिसावले बाहिर जान नसक्ने भनेर त मैले भनिसकें । गिरिजाप्रसाद कोइराला जब अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रमहरु कहाँ हुन्थे ? तसर्र्थ, दुबैको स्वास्थ्यको समस्याकै कारण यसो भएको हो ।
– पासवर्डको मिस ह्याण्डलिङका कारण रिट्वीट भएको हो । अहिले प्रहरीले यसको अनुसन्धान गरिरा’छ । प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, विश्वमा धेरैको ट्वीट ह्याण्डलिङमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।
– छोरा वा जीवनसंगिनी कसैसँग छैन मेरो पासवर्ड । म सँग मात्रै छ ।
– प्रधानमन्त्रीको पासवर्ड सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भन्ने कुरा १३ मिनेट नबित्दै थाहा पाएपछि मैले पव्लिक नोटिस गरें । तर प्रधानमन्त्रीको पासवर्ड कसले राख्नुहुन्छ, उहाँको ट्वीट कसले ह्याडलिङ गर्नुहुन्छ ? म त्यो कुरा भन्न बाध्य छैन ।
– मानिसहरुलाई भ्रम त्यस्तो पर्नसक्छ । ती स्वपनदर्शीहरुलाई, त्यस्ता परिकल्पनाकारहरुलाई के भनौँ मैले ?
– त्यसमा कानुनबमोजिम गर्नुपर्नेमा कहाँनेर गल्ती भयो ? पासाङ ल्हामुलाई त्यतिबेलाको सत्तापक्षले विदाई गर्न नचाहँदाको स्थितिमा विदाई गर्नुभयो, शुभकामना दिनुभयो जननेता मदन भण्डारीले । सरकारले नगरेको काम उहाँले गर्नुभयो । पासाङ ल्हामु नेपालमा महिला आन्दोलनमा भन्दा पनि नेपाली महिलाहरुले विश्वको सर्वोच्च शिखर चुम्ने पहिलो महिला बन्नुभयो । त्यसकारण मदन भण्डारीले दिनुभएको शुभकामना, सतपात्रलाई नै शुभकामना दिनुभएको रहेछ भन्ने स्पष्ट छैन र ! उहाँकी छोरी पनि इन्टरनेश्नल रिलेशनमा पढेर, सुनेर, जानेर, आएको योग्य मान्छेलाई सरकारले राजदूत नियुक्त ग¥यो । अर्को कुरा, बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भुकम्पले ध्वस्त भयो, हामी कार्यालय खोज्ने क्रममै थियौँ । कयाँै महिना हामी टेण्टमै बस्यौँ । र, भाडामा पासाङ ल्हामु फाउण्डेशनको कार्यालय लिइएको हो । कति भाडा भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै देखिन्छ नि ! गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई हामीले दिइएको होइ् । नेकपाको सरकारले दिइएको होइन । २०५२÷५३ सालमा ५० लाख डलरमा सिंगापुरको कम्पनीले तत्कालीन राजप्रसादबाट लिजमा लिएको थियो । नेपाल ट्रस्टमा आइसकेपछि २०६७ साल वैशाखमा सिंगापुरको कम्पनीले बेच्दा यती समूहले लिइएको देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया, त्यसका मापदण्ड पूरा गरेरै लिइएको छ ।
– नेपालले सन् २०१७ समा एमसीएलाई स्वीकार ग¥यो । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा । यो पाँच वर्षको आवधिक कार्यक्रम हो । यस हिसाबले हामीले एमसीएलाई बुझ्नु प¥यो ।
– मान्छेलाई के लाग्यो ? मनमा के कुरा पालिएको हुन्छ ? हामी सवैको मनको जवाफ दिन भ्याउँदैनौ । अमेरिकी दूतावास बोलेपनि, राष्ट्रपति ट्रम्प बोलेपनि, एमसीएमा जे कुरा लेखिएको छ, जे कुरा स्वीकार गरेका छौँ, त्यो कुरा नै हामीले भन्ने मान्ने हो । पछि व्याख्या कसले के कस्तो गर्नुहुन्छ ? त्यो उहाँहरुको कुरा हो ।
– प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो अन्र्तवार्ता दिँदापनि म सँगै थिएँ । मैले सुनेको पनि हुँ । ट्रान्सकाइब भएर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन पनि भएकै छ । यो कुरा मेरो नोटिसमा नहुने कुरै भएन । पहिलो कुरा त एमसीसी र एमसीएलाई गोलमटोल पारेर बुझ्नु भएन । नेपालका सन्दर्भमा हामीले गरेको एमसीसी होइन एमसीए हो । हामीले एमसीसी स्वीकार गर्दा इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी कुनै अस्तित्वमा थिएन । अहिलेचाँहि इण्डोप्यासेफिक हो भनेर बल गर्नुपर्ने कारण किन ? यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु । अमेरिकी दूतावासको एकजना अधिकारीले त्यसरी बोले रे । अमेरिकी राजदूतले अहिलेसम्म इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी हो भनेर बोल्नुभएको त छैन । कुनै सैनिक अखडा गरेर होइन, नेपाल भारतबीचको विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको काममा खर्च गर्नेगरी अनुदान सहयोगको कुरा हुन्छ भने नेपाल त्यसमा पिठ्यू फर्काएर हिड्नुपर्ने के कारण छ ? म चरा भइदिएको भए आकाशमा उड्थें भन्नेजस्ता कुरा किन गर्ने ?
– सीमाको समस्या कालापानीमा भारतीय सेना छ भन्दै सार्वजनिक गर्ने तथा लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गर्ने व्यक्ति को हो सम्झनुहुन्छ ? पहिले प्रेमसिंह धामी संसद्मा बोल्नुभयो । पार्टीले संसदीय दलले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको संयोजक को हो ? त्यसको नोटिसका निम्ति तत्कालीन नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको कार्यदलको संयोजक हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । नेपाल र भारतवबीच दुई बुँदामा सीमा विवाद टुंग्याउन बाँकी छ – कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रमा । ती दुई बुँदामा पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा विगतमा भएको छलफलमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय विशेष संयन्त्रमार्फत ती दुई ठाउँको छिटो टुंग्याउने भन्ने सहमति भएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक कुनै नक्सा स्वीकार्य छैन् भनेर भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुभयो । र, राष्ट्रको एकढिक्का दृष्टिकोण बनाउनु भयो । यसको समाधान उहाँकै नेतृत्वमा हुन्छ ।
– हामीले तीनवटा वैठक गरिसक्यौँ त ! चौथो बैठक पुस २३ देखि गर्ने भनिएको थियो माघ १५ गतदेखि सारिएको छ । नेकपाले वैठक गर्दैछ । त्यस बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय हुँदैछन् । राष्ट्रिय सभाको चुनाव मनोनित हुनेगरी गर्ने होइन नि ! ७६१ जना जनप्रतिनिधीहरुले मतदान गर्ने हो । एकल संक्रमणीय पद्दतिअनुसार निर्वाचन हुने हो । हाम्रो कमजोरी कहाँनेर हो भने पुस २३ गते वैठकको मिति तोक्दा नेतृत्वले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि छ । समय अलिक ख्याल गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुरामा ध्यान नपुगेकै हो । दुईजना अध्यक्ष बीचमै सहमति भएर बैठकको मिति तोकिएको हो । दुबै जनाकै सहमति भएर सचिवालयले सारेको हो । सार्ने निर्णय संस्थागतै रुपमा भएको छ । २०४५/०४६ देखि ३६ को आकारमा अघि बढेका दुईवटा पार्टी २०७५ मा आइपुग्दा ६३ को आकारमा एकतावद्ध भएका छन् । दुईवटा आन्दोलन, दुईवटा धार एक भएका हुन् । सभामुख र प्रधानमन्त्रीको लेनदेनको रुपमा तर्क गरिनु नबुझ्नेहरुको तर्क मात्रै हो ।
-बन्धक भन्ने छैन् । संसद्ले सभामुख पाउँछ । जनताको सकरात्मक आलोचनालाई अन्यथा रुपमा त लिनुहुँदैन्, तर संसद्ले सभामुख पाउने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति : २९ पुष २०७६, मंगलवार ०९:५३